CIYAARAHA CAALAMKA | Ciyaaro Online | Page 3
Home - CIYAARAHA CAALAMKA (page 3)
Wakiillada Atletico oo la hadlay Aguero
Wakiillo ka tirsan Kooxda Kubadda Cagta Atletico ee dalka Spain ayaa la sheegayaa in ay xiriir dhinaca Tilifoonka ah la yeesheen weeraryahanka reer Argentine ee Sergio Aguero. Radio Marca ayaa baahiyay in wakiillada Atletico ay ka doonayaan Aguer in uu buuxiyo booska uu banneeynayo xiddigga lagu magaacabo Antoine Griezmann,kaas oo la sheegayo in uu u batay dhinaca Kooxda Barcelona. Aguero ...
Villarreal oo billad guddoonsiisay Iniesta,imisa ayey suuqa ka joogtaa?
Kooxda kubadda Cagta Villarreal ee dalka Spain ayaa xalay billad guddoonsiisay kabtanka kooxda kubadda Cagta Barcelona ee Iniesta. Iniesta ayaa xaqiijiyay in dhamaadka xagaagan uu isaga tagayo Kooxda Barcelona iyada oo la isla dhexmarayo goobta uu ku biirayo. Billadda Kooxda Villarreal ay ku ddoonsiisay Iniesta ayaa suuqa waxaa ay ka joogtaa £39,waxaana laga heli karaa Keydka Kooxda Barcelona. Ka hor inta aysan ciyaarta ...
Woves oo heshiis la gaartay ADIDAS
Kooxda kubadda Cagta ee Wolverhampton Wanderers,ayaa shaacisay heshiis afar sano ah oo ay la gaartay sharikadda sameysa qalabka ciyaaraha ee ADIDAS. Wolverhampton Wanderers,ayaa bishii la soo dhaafay xaqiijisay in ay ka mid noqotay horyaalka heerka 1aad ee Premier League kaddib markii ay qaadday horyaalka labaad ee championship. Laurie Dalrymple,oo ah agaasimaha guud ee Kooxda Wolverhampton Wanderers, ayaa sheegay in kooxda ay ku ...
Ferguson oo laga saaray qeybta gargaarka deg degga ah
Tababarihii hore ee Kooxda Kubadda Cagta Man United Ferguson,ayaa laga saaray qeybta deg degga ah ee Isbitaalka uu ku jiray kaas oo uu ku xanuunsanayay maalmihii la soo dhaafay. Ferguson,ayaa 5tii bishan lagu sameeyay qalliin dhinaca Maskaxda ah kaddib markii uu dhiig kaga furmay,waxaana uu hadda ku jiraa qeybta soo kabashada ee isbitaalka. Ferguson,waa 76 jir muddo soo maamulayay Kooxda Man ...
Kaddib kulamadii bartamaha Todobaadka ,yaa u dhow Kabta Dahabka ah ee Europe?
Lionel Messi ayaa mar kale shabaqa gaaray kulankii kooxdiisa Barcelona ay Goolasha kala daashay dhigeeda Villarreal kana tirsanaa Horyaalka Spain ee LaLiga. Messi ayaa dhaliyay goolkiisii 34-aad ee horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan waxana uu haatan ku dhaw yahay in uu ku guulaysto kabta dahabka ah ee Yurub markii 5-aad. Mohamed Salah ,oo xilli ciyaareed cajiib ah ku qaatay Liverpool ...
Maxaad ka ogtahay Mushaarka Tababarayaasha 32ka dal ee ka qeybgelaya Koobka adduunka?
Maamulayaasha Hogaamin doona Wadamada 32-ah ee usoo baxay Dhacdada ugu weeyn Kubadda Cagta ee Koobka Adduunka ayaa hada ku Mahquulsan sidii ay usoo Xulan la haayeen Ciyaartoyda Matalaya Dalalkaas. Tababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate ayaa kaalinta 7-aad kaga jira tababarayaasha ugu mushaharka badan koobka adduunka. Gareth Southgate ayaa jeebka ku shubta sanadkii 1.69 milyan sida laga soo xigtay ...
Antonio Conte oo ka jawaabi diiday Su’aal Mustaqbalkiisa la xiriirtay, maxay aheyd??
Tababaraha dalka Talyaaniga kasoo jeeda ayaa la weydiiyay Su’aal waayahaan oo dhan uu wajahayay intii lagu jiray shirkiisii Jaraa’id ee keddib ciyaartii ay garab dhaca la galeen kooxda Huddersfield. Miyaad sii hoggaamineysaa kooxdan Sanadka dambe? “Waxaan u maleynayaa in kulankan uu yahay mid ka mid ah kuwii iigu dambeeyay ee Sanadkan – waa uun intaas wax kale oo aan kusii ...
Jose oo ka hadlay Waxqabadka Sanadkan ee United: ‘Marka ay kaa wada Badiyaan Kooxaha Heerka hoose u laabanaya…….
Macallinka dalka Portuguese-ka kasoo jeeda ayaa wuxuu aad ula yaabanyahay awoodda kooxda marka ay la ciyaareyso kooxaha kasoo horjeeda wuxuuna sheegay in kuwa yaryar oo kaa badiya aysan aheyn wax la dhadhansan karo. “Aniga ahaan, In aan ka badiyo kooxaha Yar-yar oo aan khasaaro kulamada kooxaha waaweyn – Markaan leeyahay ‘Small, Yaryar’ iyo ‘Big, Waaweyn’, Ha leyska key cafiyo, waayo ...
Yaya Toure oo dhankiisa ka galay Sagootinta Iniesta oo ka tegaya Barcelona
Laacibkii hore ee kooxda Barcelona ayaa Arbacadii wuxuu muujiyay hadalkiisa ku aaddan maca salaameynta halyeygii Barcelona iyo Spain, Iniesta oo aadaya horyaalka Japan. Andres Iniesta wuxuu kula biiray Yaya Toure safka kooxdiisa, ka hor inta uusan Yaya Banneyn kooxda Barcelona. Laacibka dalka Ivory Coast wuxuu markii dambe ku biiray kooxda Manchester City keddib 8-sano oo uu kooxda ku sugnaa. Yaya ...